ကုလသမဂ္ဂ (အင်္ဂလိပ်: United Nations) သည် နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ၊ လုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၃) နိုင်ငံရှိပြီး အဖွဲ့ဌာနချုပ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ နယူးယောက်မြို့တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြ မြေပုံ [မှတ်စု 2]
လုံခြုံရေးကောင်စီသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်သည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၁၅) နိုင်ငံ ပါဝင်ပြီး အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် (၅) နိုင်ငံနှင့် ယာယီအလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ကြသည်။ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှာ တရုတ် ၊ ပြင်သစ် ၊ ရုရှ ၊ ဗြိတိန် နှင့် အမေရိကန်တို့ ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် ဗီတိုအာဏာ သုံးစွဲပိုင်ခွင့် ရှိကြသည်။ ကျန်အလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုမူ မဲခွဲတင်မြောက်ပြီး ဗီတိုအာဏာ သုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိပေ။
This map does not represent the view of its members or the UN concerning the legal status of any country, nor does it accurately reflect which areas' governments have UN representation. This map shows partially recognized states such as Kosovo or Taiwan as part of their claiming governments (Serbia and China respectively)
The World Today (PDF)။ 18 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country”
Official Languages, www.un.org. Retrieved 22 May 2015.
UN welcomes South Sudan as 193rd Member State။ United Nations (28 June 2006)။4November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
A/Res/73/271 –e– A/Res/73/271။